လေဆိပ်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဘာစားမလည်း…. ? 962 views
လေဆိပ်ကိုတော့တော်ရုံနဲ့တော့မရောက်ဖြစ်ကြဖူးနော်… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားမှာတို့၊ ကိုယ်နဲ့စပ်စပ်တဲ့ လူတွေ ခရီးသွားမယ့်အခါမျိုးမှာမှသာလေဆိပ်ရောက်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲရောက်ရောက်ပါစေ လေဆိပ်ရောက်ရင် ဘာစားရမလဲ ? အက်မင်တို့ဒီတစ်ခေါက်လေဆိပ်ရောက်ဖြစ်တော့ ‘San Taw Win’ ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကြီးမှာသွားစားသောက်ခဲ့တယ်။ အရင်ကတော့ ‘San Taw Win’ Food Center ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့တွေ့နေပေမယ့်လည်းအခုတော့ Restaurant ကြီးအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာ ဝင်စားဖြစ်ခဲ့လို့ MyLann ဘော်ဒါတွေကိုပြန်ညွှန်းပေးပါရစေ…
‘San Taw Win’ Restaurant နဲ့ Food Center ကကပ်လျက်ဆိုတော့ တော်တော်များများကမှားတတ်ကြတယ် Restaurant ကိုသွားချင်ပေမယ့်ဝင်လိုက်တာက Food Center ဖြစ်နေတာ… ဆိုတော့ Restaurant ကတော့သိသာပါတယ်… လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့….။
‘San Taw Win’ ကဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတာနဲ့ သူ့ရဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ Decoration ပြင်ဆင်ထားပုံတွေကခမ်းခမ်း နားနားပဲ… ထိုင်ခုံတွေကအစကြိမ်ခုံတွေ၊ ထွန်းထားတဲ့မီးအိမ်လေးတွေကအစ ကြိမ်လေးတွေ၊ ဝါးလေးတွေနဲ့လုပ်ထားပြီး ပုသိမ်ထီးလေးတွေနဲ့လည်းအလှဆင်ထားတယ်။ နံရံမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကို ဖော်ကြူးနေတဲ့ သဘာဝကျကျပန်းချီကားတွေနဲ့ထည်ထည်ဝါဝါဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာ့ဂီတတူရိယာကိုလည်း ထားရှိထားတဲ့အပြင် နေ့လည်စာစားချိန်မှာလည်း ယဉ်ကျေးမှုဠာနကလူတွေရဲ့ဆောင်းတီးဖျော်ဖြေပေးမှုကို သာယာငြိမ့်ညောင်းစွာနားဆင်နိုင်မှာပါ…. ဆိုင်ထဲမှာလည်း မြန်မာ့လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေ၊ ယွန်း၊ ပန်းပုထုထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Souvenir Shop လေးရှိပါတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့အငွေ့အသက်တွေအပြည့်နဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း စတဲ့မိမိနဲ့ဆက်စပ်တဲ့လူတွေ (မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူတွေကို) ဒီဆိုင်လေးခေါ်ပြီးဧည့်ခံနိုင်ပြီနော့
အစားအစာမမှာခင် ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Welcome Tea အနေနဲ့ Jasmine Tea မွှေးမွှေးလေးနဲ့ အရင်ဆုံးဧည့်ခံတယ်။ ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကလည်းပုဆိုးလေးတွေ၊ထမီလေးတွေနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်လေးတွေ၊ ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေး Serve လုပ်သွားတာတော့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ Baby Chair လေးတွေလည်းရှိတော့ ခေးလေးတွေပါရင်လည်းသူတို့အတွက် ပူစရာမလိုတော့ဖူး။ ကားပါကင်လေးလည်း အဆင်ပြေတယ်။ နောက် Internet အတွက်လည်းမပူရဖူး။ free wifi ပေးထားတယ်။ မွေးနေ့ပွဲတွေ ဘာတွေဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေစေမယ့်မီနူးတွေပြန်ဆွဲပေးတယ်တဲ့။
ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ အမဲ၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ တွေကို အကြော်၊ အချက်၊ အသုပ်၊ ကြော်ချက်၊ အကင်၊ အနှပ်၊ အရည် စသည်ဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရနိုင်တဲ့ တရုတ်အစားအစာဟင်းပွဲဟင်းပွဲတွေများစွာရှိပါတယ်။ အက်မင်တို့သွားတုန်းက ဝက်ခြောက်စပ်၊ သုံးမျိုးသုပ်၊ ပုစွန်ပေါင်း၊ ကြက်သားကြက်ဥလိပ်၊ ဂုံးပဲကြာဇံပေါင်းတွေစားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ဒီဆိုင်မှာ ပီကင်းဘဲကင်ကလူကြိုက်များတယ်တဲ့နော်…. အက်မင်တို့တော့ ဒီတစ်ခေါက်မစားဖြစ်ခဲ့ဖူး…
အချိုပွဲမှာဆိုရင် ရေခဲမုန့်၊ ရာသီပေါ်အသီးဖျော်ရည်၊ ကျောက်ကျောပေါင်း၊ ငှက်ပျော်သီးကြော်၊ အဲ့ဒါတွေတွေ့ခဲ့ပါတယ် (စားခဲ့တာမဟုတ်ဖူးနော် :P ) ဝါးလုံးစိပ်လေးတွေနဲ့ Decoration ပြင်ထားတဲ့ Bar Counter လေးလည်းရှိသလို ရာသီပေါ်အသီးဖျော်ရည်တွေ၊ Cocktail တွေနဲ့အတူ အခြားသောက်စရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာတစ်ခုက စားပွဲပေါ်မှာဆိုရင် ဟင်းပွဲတွေကို Circle လှည့်လို့ရတဲ့အတွက် အတင်း၊ ကျော်ခွနှိုက် နေစရာမလိုသလို အိနြေ္ဒရရလေးယူစားလို့ရတယ်။။
အစားအစာပိုင်းမှာဆိုရင် ကွန်ကျိုးက Chef ကိုယ်တိုင်ကဟင်းပွဲတွေစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့ အရသာပိုင်းကတော့ စိတ်ချရတယ်။ ပင်လယ်စာတွေဆိုရင်လည်း လတ်ဆတ်မှုကိုခံစားရတယ်။ ဈေးနှုန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းနည်းများနေသလို… သို့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ဟင်းပွဲတစ်ပွဲကတစ်ယောက်စာမက၊ အနည်းဆုံးသုံး၊ လေးယောက်စာဆိုတော့ တကယ့်တကယ်လူအများနဲ့သွားစားတာဆိုရင် ဟင်းပွဲလည်းအစုံစားရမယ်၊ တန်လည်းတန်သွားမယ်။ ဟင်းပွဲပြင်ဆင်တာလည်းအချိန်သိပ်မကြာဖူး။ (၁၀)မိနစ်ကနေ (၁၅)မိနစ်အတွင်းပဲ။ ဒီဆိုင်မှာ Private Room လည်းရှိတယ်။ အက်မင်လည်းသွားလေ့လာကြည့်တော့ အခန်းထဲမှာခမ်းခမ်းနားနားနဲ့ ထိုင်ခုံတွေတောင်ပါလိုက်သေးတယ်။ နောက် Toilet ပါရှိတယ်။ အခန်းရဲ့နံရံမှာလည်း မြန်မာ့လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ နောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရေနွေးကြမ်းခွက်နဲ့ ရေနွေးအိုးလေးတွေပါ ထားပေးထားတယ်… ဆိုင်ကလည်းလူအယောက်(၁၅၀)လောက်ဆံ့တယ်။ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းပဲ….
ဒီဆိုင်လေးက ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့အရှေ့တည့်တည့်၊( Season Hotel) အနီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာပါ။ (လေဆိပ်ထဲကိုဝင်လာရင် Terminal 1 ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာပါ)။ ဖုန်းနံပါတ်က 09-73255598 ပါ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိဖွင့်တယ်။
ပုစွန်ပေါင်း - (၂၅၀၀၀)ကျပ်
ပုစွန်ကြီးတွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ လေးယောက်လောက်စားလို့ရတယ်။ ခေါက်ဆွဲဖက်လေးတွေလည်းပါသလို Cheese လည်းပါတယ်။ အနံ့လေးကတော့ ချိစ့်နဲ့ပုစွန်နံ့မွှေးမွှေးလေး… ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်လည်းပါတယ်။ အရသာလေးကတော့အဆိမ့်လေးပဲ။
ကြက်သားကြက်ဥလိပ်တို့ဟူးပေါင်း - (၆၈၀၀) ကျပ်
တို့ဟူးလေးရယ်၊ ပဲပြားလေးရယ်၊ ကြက်သားလုံးနဲ့ ကြက်ဥ အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တော့ အရသာက အလေး၊ အဆိမ့်လေး။ လေး၊ငါးယောက်လောက်စားလို့ရတယ်။
ဂုံးပဲကြာဇံပေါင်း - (၁၈၀၀၀)ကျပ်
ဒါကတော့အက်မင်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ပဲကြာဇံနဲ့ဂုံးလေးကိုပေါင်းပြီးအပေါ်ကအရသာလေးတွေ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီကြော်လေးတွေတင်ပေးထားတာ။ တော်တော်လေးတော့စားကောင်းတယ်။ ဂုံးကလည်းမာမာထုတ်ထုတ်လေး နဲ့ လတ်ဆတ်တယ်။ အရသာကတော့အချိုနဲ့အငံဘက်နည်းနည်းသွားတယ်။
ဝက်ခြောက်စပ် - (၈၈၀၀)ကျပ်
ဝက်သားလုံးကိုမှကော်မှုန့်၊ ကြက်ဥအနှစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး Pan Fried ပြန်လုပ်ထားတာ။ အဲ့ဒီဝက်သားကြော်ကို စားရင်တော့ပုံမှန်အရသာပဲ။ သိပ်ထူးခြားမှုမရှိသလို… သို့ပေမယ့်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြူးထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နီ၊ ပေါင်မုန့်ခြောက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်လေးတွေရဲ့အရသာနဲ့ပေါင်းစားလိုက်တော့မှ ထွက်လာတာက လေးသလိုလိုလေးနဲ့ စပ်စပ်လေးဖြစ်သွားတာ။
သုံးမျိုးစပ်သုပ် - (၃၈၀၀)ကျပ်
ကုန့်ချိုင်၊ မှိုခြောက်ပန်းခြောက်နဲ့ ဥနီတွေပေါင်းပြီးသုပ်ထားတာ။ အရသာကတကယ့်ကို ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးမို့ ချဉ်စပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေမြည်းစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။